लिक त बन्यो तर रेलै छैन : जयनगर – जनकपुर रेल सेवा — Motivatenews.Com
लिक त बन्यो तर रेलै छैन : जयनगर – जनकपुर रेल सेवा
भदौ १८, जनकपुर – आगामी पुसबाट जयनगर – जनकपुर रेल सेवा चल्ने तरखरमा छ । बर्दिबास सम्म लिक बन्दैछ । तर त्यो कुन ढंगले चलाउने सरकार अझै टुंगोमा पुगेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओली र बिम्स्टेक सम्मेलनमा आएका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच यस विषयमा गहन छलफल भयो । प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो , भेटको मुख्य एजेन्डा नै रेल बन्यो ।
नेपालले रेलमार्गमा प्राविधिक तयारी गरेकै छैन । रेल किन्ने वा भाडामा लिने निचोड निस्किएकै छैन । सरकारको यो सुस्तताले समयमा रेल सञ्चानल हुने/नहुने अन्योल बढेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । तीन डिब्बा सहितको नयाँ रेल किन्दा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । त्यसैले डिब्बा भाडामा लिने केही अधिकारीको राय छ । केही प्राविधिकलाई प्रशिक्षण समेत दिने ‘प्याकेज’ मा भाडामा डेढ वर्षका लागि लिनुपर्ने अन्य अधिकारीको धारणा छ ।
दुई देश बीच रक्सौल – काठमाडौं रेलमार्गको अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ । तर साइडलाइन वार्तामा दुई प्रधानमन्त्रीबीच लिक बनि सकेको जयनगर – जनकपुरमा रेल सञ्चालनमा बढी कुरा भएको स्रोतले जनायो । दुवैले यसमा गम्भीर चासो देखाउँदै छिटो सञ्चालनका लागि आफ्ना मातहतलाई निर्देशन दिए ।
प्रधानमन्त्री मोदीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक अधिकारीले भने, ‘रक्सौल – काठमाडौं रेलको काम अघि बढ्नेछ । तर जयनगरबाट जनकपुर हुँदै बर्दिबास आउने रेलको काम के भएको छ ? त्यो रेलमार्ग जहाँ सम्म पुगेको छ, त्यहाँ सम्म कुनै ‘मोडालिटी’ तय गरेर रेल सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । यसमा ढिलाइ नगरौं ।’
ओली मोदी कुराकानीमा सहभागी ति अधिकारले भने, ‘भारतले नेपालमा अन्तरदेशीय ‘प्यासेन्जर’ रेल नयाँ ढंगले सुरु गरेको सन्देश दिन खोजेको छ ।’ यो अवस्था आएकामा नेपाली अधिकारी स्वयं चिन्तित छन् । ‘रेल कसरी चलाउने भन्ने विषयमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीस्तरमै छलफल हुनु पर्ने दुखद हो’, द्विपक्षीय बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने, ‘हामी आफैं योजना अनुसार काम गर्दैनौं । अनि छलफल भएका बेला अलमलमा पर्छौं । अहिले काम सकिन्छ, प्राविधिक चाहिन्छ भन्ने जानकारी सरकारलाई नभएको हो र ? तर किन तयारी भएन ? ’